Kekọrịta ihe omuma Linux gi | Site na Linux
Kekọrịta ihe ọmụma Linux gị
Ide blog, idebe gị niile, kwa ụbọchị, na-akwụghị penny, bụ ọrụ siri ike. Ọ gụnyere ide Satọde na Sọnde ọbụlagodi n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, ọbụlagodi honiimu nwunye m ma ọ bụ mgbe m gara mba ọzọ maka ọrụ. Eeh, ọ bụ ntakịrị ihe amataghị na ịchụ ego, dịka ọrụ dị mma nke ndị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-amaghị ihe mmemme na-emepe sọftụwia n'efu. Nke a, na mgbakwunye, na-akọwapụta ya na ndị ọrụ / ndị na-agụ akwụkwọ na-achọwanye ihe, yana ezigbo ihe kpatara ya.
Nkwalite a anaghị achọ inye ọmịiko ma ọ bụ hapụ ahịrịokwu ekele, mana kama gbaa ndi n’emebeghi onyinye nye obodo aka ka ha mee. Nke a pụtara ịhapụ àgwà nnabata ahụ nke na-adịrị anyị mma mgbe ụfọdụ.
Taa enwere m epiphany, ụdị nkpughe: ihe kachasị mkpa bụ obodo. Ọ bụ mmewere na-edozi software n'efu. N'ezie, nke a pụtara ịmeghe obodo na ngwanrọ ahụ ma ọ bụ ya na-enye ya ndụ. Anyị na-ahụ ya na ọrụ ndị ahụ, ebe ọ bụ na ha enweghị obodo dị mkpa, na-echezọ.
Ugbu a, olee otu ị ga-esi wuo obodo? Azịza ya dị na ajụjụ a. Iwu ụlọ pụtara ihe. Ma ọrụ onye? N'ime ole na ole? N'ime ha niile? N'ime ya ka ọdịiche dị n'etiti ụdị obodo dị iche iche dị.
N'ụzọ doro anya, n'ọhịa nke ngwanrọ n'efu mgbe anyị na-ekwu maka obodo anyị na-ezo aka na ntinye aka dị mkpa nke imirikiti ndị otu ya. Nke ahụ bụ ụdị nke obodo m ga-achọ ịbụ akụkụ ya ma ekwenyere m na, na naanị ihe kpatara ya, anyị nwere ike ịrụ ụka na ọ bụ ụdị obodo dịka usoro ihe ọmụma dị na ngwanrọ n'efu.
Otu nwere ike isonye n'ọtụtụ ụzọ na n'ọtụtụ ebe, n'ezie ọtụtụ n'ime gị na-eme ya. Ime ntinye koodu ebe a, ntughari ebe, wdg.
Ebumnuche m bụ imeghe ọnụ ụzọ nke blog a, nke mgbe ọ gbalịsịrị ike ịghọ a ederede n'etiti free software obodo. Achọrọ m ka ị mara na ebe a ị nwere ọwa iji bipụta ngwa ngwa na enweghị nsogbu ọ bụla onyinye ị chọrọ ịme. Ha ekwesighi ịghọ ndị na - ede blọgụ ma ọ bụ ndị ọkachamara Linux, naanị nwee ihe na - atọ ụtọ ịkekọrịta ma dee ya.
Echiche bụ ime a izu ụka. Ihe ikwesiri ime bu zitere anyi email ya na mini onye nduzi, na n'ọnụ, wdg. (n'ime ederede ederede doro anya) na ha chere na ọ bara uru kee ya. Anyị na-elekọta ịhazi, bipụta ya ma nye nkwenye na nnabata nke ikpe ahụ, n'ezie.
Dị njikere ime gị bit?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Kekọrịta ihe ọmụma Linux gị
O yiri ka ọ bụ nnukwu ihe ị ga-esonye. E wezụga n'elu ị nwere ike ịtụ ya ma mee wiki.
Zaghachi José Antonio Costa de Moya
magburu onwe 😀 iji gaa n'ihu na-eto eto, blọọgụ a bụ ezigbo ntụnye maka m dị ka onye ọrụ Linux, anaghị m katalọgụ onwe m ma ọ bụrụ na onye ọkachamara ma ọ bụ novice, n'ihi na anyị agaghị akwụsị ịmụ ings ekele
Echere m na ọ bụ echiche magburu onwe ya, m ghọtara ọnọdụ gị. M na-agbasi mbọ ike ijigide obere blog nke m malitere n'oge na-adịbeghị anya na ọrụ ahụ siri ike ...
Inye aka na obodo bụ ihe masịrị m nke ukwuu, yabụ aga m amalite iche maka ihe 🙂
Have rụọla ọrụ dị mma na saịtị a, ekele na ọersụ!
Ekele si Uruguay
Zaghachi Luis López
Achọrọ m ikele gị, anyị maara ọrụ na nraranye nke achọrọ iji jigide blog nwere ogo "Ka anyị jiri Linux" nwere ọtụtụ onyinye dị mma. Saịtị dị ka nke a dị ugbu a karịa ka ọ dị ugbu a na ndị nọ n'akụkụ nke ọzọ na-emechi emechi ma na-anwa ịme monopolize ọbụlagodi obere kọmpụta.
Na obodo m, m na-achọ ịkwalite sọftụwia n'efu na ihe niile m nwere ike, ọkachasị "Ubuntu" nke m chere na ọ bụ ihe pụrụ iche na ọtụtụ ihe m na-ebipụta na ihu ihu m, ekwenyere m, sitere na blọgụ a.
Echiche a di uku ma nwekwa olile anya na ochoro ikwughachi na obodo, ebe ike nke "Community" bu kpomkwem na ndi otu ya dum na-aru oru. N'iru…
Taa ọtụtụ blọọgụ na-enyere aka iji sistemụ anyị, nke anyị ji azụ onwe anyị, agbanyeghị na ọ ka mma karịa ma ọ bụrụ na etinyere ya na ụfọdụ ma ọ bụ otu blog, ọ bụ ya mere m ji abanye na blọọgụ a oge niile ma enwere ọtụtụ ndị nwere ike ịrụkọ ọrụ site na ịkekọrịta ihe ọmụma, amaghị m Ọ bụrụ na m nwere ike inye aka na ihe, echere m na na GIS m nwere ike ide edemede, ọ bụ ezie na enwere blọọgụ ndị ọzọ na-eme otu ihe ahụ, ihe doro anya bụ na blọọgụ a dị ezigbo mma maka anyị bụ ndị ọrụ, mbọ na nraranye na-adịgide adịgide, naanị ihe na-ewute bụ inwe mmadụ ole na ole maara nke ọma na nso onye dị njikere iji linux na desktọọpụ ma ọ bụ akwụkwọ ndetu, belụsọ igwu egwu na ekwentị na android na ihe ọ bụla
Zaghachi anuro croador
Daalụ Eider… nke ahụ bụ etu ọ dị
Ana m agbakwunye na ọ bụ obodo anyị tụpụtara, ọ bụghị nke "distros agha" ma ọ bụ "desktọọpụ gburugburu", kama ọ bụ ebe egwuregwu ma ọ bụ "nkuru" ebe anyị niile nwere ike ịhụ akụkụ dị mma na nke adịghị mma, ọbụlagodi dịka ndị ọrụ nwere ebumnobi ebumnuche nke isiokwu.
Zaghachi Joel Almeida García
Ndewo enyi, ezitere m onyinye m na m nwere olileanya na ọ ga-arụ ọtụtụ. Ka ọ dị
Zaghachi Luís Adrián Olvera Facio
Ọ kwesịrị ịbụ Linux n'ozuzu, ma ọ bụ enwere ike ilekwasị ya anya na otu distro (na ị naghịdị eji ya)?
Ndewo, m na-eji ngwa BackInTime na Ubuntu 12.04 lts, ​​mana mgbe m gbalịrị ịhazi ngwa a na Ubuntu 12.10, enweghị ike ịchọta folda .gvfs yabụ enweghị m ike ịhazi ngwa ahụ. Daalụ n'ọdịnihu n'ihi na amaara m na ị nwere ike inyere m aka.
Zaghachi Angel J. Mota
Ezigbo echiche ma ezigbo agbamume ka ị gaa n’ihu !!
Naanị m chọrọ ka ị hapụ m ka m kelee gị maka ịkekọrịta ihe ọmụma gị! Ọrụ ike !!!
Jorge Ruiz kwuru dijo
Ọfọn, ịkpọ òkù ahụ bụ: "Ka anyị jiri Linux"
Na ikerịta ihe ọmụma, ọ naghị efu anyị ihe ọ bụla ma anyị nwere ike nweta ọtụtụ nloghachi!
Zaghachi Jorge Ruiz
Carlos Rocha onye nhazi ihe oyiyi dijo
Emepụtara m ụfọdụ ezigbo nduzi maka iji libreoffice nke m na-arụ ọrụ na ya na mpaghara, olee otu anyị ga-esi mee nke ahụ?
N'ebe ahụ, m hapụrụ njikọ m dokwara anya na ndị nduzi ahụ ga-agbazi ha ma ọ bụ na ị gaghị eme nke ọma gịnị ka anyị nwere ike iji nke ahụ mee?
Zaghachi Carlos Rocha
Ekwenyere m, ị ga-etinye ihe ...
Achọrọ m ịtinye na mgbe ụfọdụ ọtụtụ mmadụ chọrọ ịmalite blọgụ nke ha, ka ha nwee ike ịkekọrịta ihe ọmụma ha n'ụzọ dị otu a. Ma na njedebe blog agwụ "ihe ọ bụla", bụzi ihe mgbe ochie na-enweghị akwụkwọ ozi ọ bụla, ma ọ bụ ya na ụfọdụ ederede dị mma mana ha enweghị mgbasa ozi dị mma na posts ndị ahụ n'ikpeazụ eruteghị onye ọ bụla (ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole) obodo ngwanrọ n'efu anaghị M na-erite uru dị ukwuu, ebe ọ bụ na anaghị m erute ọtụtụ ndị. N'ebe ahụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị oge iji nwee ike itinye ego maka mmezi nke blog ụzọ kachasị mma iji ruo ọtụtụ mmadụ aka bụ nke a. Inyere blọọgụ amaara ama ebe enwere ọtụtụ ndị mmadụ na dịka ọ na-ekwu n'elu ha ga-ahụ maka ịnye gị ekele niile na itinye aha onye edemede nke were nsogbu ịme ya na-enye ya mkpa dị mkpa ma ọ bụ ya mere m chere hehe. Cheers
Nkwupụta ahụ dị mma, ụbọchị abụọ gara aga emere m blog naanị n'ihi na achọtara m ihe dị na Ubuntu na na mbipute ya 12.10 nwere obere mgbanwe na mgbe m bipụtara ya echere m, gịnị ugbu a? Enweghị m ike ịnọgide na-azụlite ya, enweghị m oge. Nkwupụta a gaara abụ nke zuru oke.
Zaghachi Rodny Silgado Cabarcas
Ebumnuche magburu onwe ya, enwere m olileanya na enwere ọtụtụ ndị ọrụ a gbara ume ma zipu onyinye ha, yabụ a ga-enweta blọgụ dị iche iche.
Zaghachi Eddy Santana
Echekwara m na ihe oyiyi ahụ dị ọtụtụ, ụfọdụ ndị mbido na-agwụ ike n'ịhụ ederede dị ọcha ma echere m na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na agbakwunye obere onyogho maka mgbanwe. Na izipu izizi nwere ike ịgwụ ike mana oge na nyocha ị mụtara otu ị ga - esi meziwanye ma mee ka ọrụ gị nwee ike ịgụ.
New net ASUS F201E na Ubuntu tinyegoro ya
Site n'echiche m: Gini ka DesdeLinux na-enye n'ezie na obodo uwa?